Madaxwaynaha dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia - BBC Somali
Madaxwaynaha dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia
Madaxwaynaha dowlad deegaanka Soomaalida ee Ethiopia, Cabdi Maxamuud Cumar, ayaa booqanaya dalka Maryakanka, oo uu sheegay in uu u tagayo si uu kulanno ula qaato Soomaalida Ethiopia ee ku sugan dalka Maraykanka.
Madaxwaynaha ayaa intii uu kii jeeday Maraykanka ku hakaday magaalada London. Cabdiraxmaan Koronto, ayaa la kulmay oo ka waraystay arrimo la xiriira safarkiisa.
Wuxuu kaloo madaxwaynaha deegaanka Soomaalida Ethiopia ka waramayaa dhibaatooyin lagu eedaynayo in ay ku kaceen ciidamada Layuu Police-ka ee gobolka Soomaalida Ethiopia.
Waxaa kaloo wax laga waydiiyay arrimo la xiriira dhinaca amniga, dad la sheegay in military-ga Ethiopia kala baxeen saldhig booliis oo ku yaalla Qabridahar iyo dad dhowaan laga kaxaystay iyaga iyo xoolahood deegaanka Bambaas.
Wuxuu Madaxwayne Cabdi Cumar ka hadlayaa oo kale xaaladaha horumarka deegaanka dhinaca waxbarashada, isagoo sidoo kale soo jeedinaya baaqyo ku aadan abaaro ka jira deegaanka oo dhibaatooyin ku haya dadka.